AKCKỌ: Ndị na - ahụ maka akwụkwọ na California esoro ngwaọrụ RFID dị ka akụkụ nke onyinye mkpali gọọmentị etiti maka Isi mmalite August 31, 2010, na Teknụzụ, nke Rusty Ray | Ngwọta OMG
IHE NDỊ AHỤ: California tupu ndị ọkà mmụta sayensị na-ejikọta ya na ngwaọrụ RFID dịka akụkụ nke mmetụ nchịkwa gọọmentị maka Head Start On August 31, 2010, na Technology, nke Rusty Ray
Nke a bụ nyocha ihuenyo izugbe nke ndị ọrụ na ndị nchịkwa na-eji teknụzụ RFID ga-ahụ na kọmputa ha. C Square - Ngwọta Ndozi Nlekọta Ọganihu Maka Carelọ Ọrụ Nlekọta ,mụaka, nke Onye Ngwọta Ngwọta, Inc. wetara. PHOTO CREDIT: Contra Costa County Employment & Human Services IT Department
Ihe dị ka narị abụọ na iri anọ tupu ndị ọkà mmụta sayensị nọ na Contra Costa County, California na-eji usoro mgbasa ozi redio (RFID) na-achọpụta ihe dịka akụkụ nke nkwalite mmezi nke Head Start mere ka American Actual Recovery and Reinvestment Act nke 2009 (ARRA) kwadoro ya.
Usoro nke ọnwa chọrọ ka ụmụ akwụkwọ na-edebanye aha na ntinye nke nne na nna, ma tinyezie ya na onye na-arụ ọrụ na-eme ka RFID gbanye n'ime igbe dị n'akụkụ aka nri. The jersey yiri ihe ndị na-eme egwuregwu basketball na-eyi ma na-etinye na uwe ụmụaka kwa ụbọchị.
Igbe dị ọcha ndị na-ekpuchi ụlọ elu ụlọ na ebe ịgba egwu egwuregwu "na-agụ" akara nke ndị RFID na-ebugharị na mkpado.
Software na-enye ndị nkụzi na ndị nchịkwa ohere ịhụ ụmụ akwụkwọ egosipụtara na ihuenyo dịka ntụpọ na-agagharị. Ọ bụrụ na otu n'ime ha na-awagharị na mpaghara ebe ha kwesiri ịbụ, a na-ezigara onye nkuzi ozugbo.
Onyinye teknụzụ maka $ 50,000, nke Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ndị Ọrụ US na-elekọta, kwere ka ndị isi Contra Costa County nwee ike iji akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ọma, ma n'otu oge ahụ meziwanye nchekwa nke ụmụ akwụkwọ.
"Isi ihe kpatara ya, n'ụzọ doro anya, maka itinye ụdị usoro a bụ nchekwa," ka Karen Mitchoff, ọnụ na-ekwuchitere Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ & Ọrụ Ndị Ọrụ na Contra Costa County kwuru, na mkparịta ụka nkịtị na Big 3 News na Monday.
Mitchoff mesiri ike na usoro a abụghị 24 / 7, ọ bụ naanị na e mejuputara na otu ebe site na ngụkọta nke isi iri na isi nke ụlọ Start Starter.
"Nke a bụ naanị mgbe ụmụaka nọ na campus ahụ, na-edebe ebe ha nọ na klas na n'èzí n'ámá egwuregwu ahụ," ka onye nnọchiteanya ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu. "Ọ bụ nsogbu nchekwa, dịka ọnụọgụ nọmba. Nkà na ụzụ emeela ka ọ dịrị anyị mfe ilekọta ụmụaka niile. "
Ego teknụzụ mkpali ahụ - akọwapụtara na webụsaịtị Recovery.gov dị ka inye "ọhụhụ kachasị mma, nchekwa na nchekwa" maka ụmụ akwụkwọ - so na nnukwu ego $ 1.1 nyere onyinye maka ọzụzụ maka ndị ọrụ na mmepe na nkwalite akụrụngwa dịka nkwukọrịta na vidiyo onyunyo usoro ndozi.
Iji kwado usoro ihe a, ndị isi obodo ga-eji ego ha nweta ego ha iji nweta nkwalite, nnọchi ma ọ bụ gbasaa nke components.
Mitchoff kwuru na ọrụ ọhụrụ ahụ na-enye ndị nkụzi ohere ka ha na ụmụ akwụkwọ nọrọkwuo oge na obere oge ha ga-edecha akwụkwọ, ọnụ ọgụgụ ndị na-abịa ọmụmụ ihe na usoro nchịkọta nri.
"Isi mmalite chọrọ ka ọ bụghị naanị na ị na-abịa mgbe ụmụaka batara n'ụtụtụ, dị ka mgbe mụ na gị gara ụlọ akwụkwọ, mana ọbịbịa ga-aga Karen Mitchoff, onye na-ekwuchitere ọrụ na Contra Costa County & Human Services na-ekwuchitere oge ọ bụla," Mitchoff kwuru.
Ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ na-atụle ngwaọrụ ndị na-ekpo ọkụ RFID ga-azọpụta n'etiti otu awa ruo awa atọ nke onye ọ bụla nkuzi, kwa ụbọchị. Kwa ụlọ akwụkwọ nwere ndị nkụzi atọ, nke na-anọchi anya ego nke $ 45,000 kwa ọnwa.
Ka ọ dị ugbu a, Mitchoff kwuru na mmeghachi omume ọha na eze maka usoro ihe a akwadola.
"Anyị na-agakwuru obodo n'ihu oge, nke mere na ndị nne na nna ga-ama ya, na ha kwadoro ya," ka Mitchoff kwuru. "Aga m agwa gị, otu nne na nna nwere nchegbu gbasara nke a. O chere na enwere ike itinye ego a maka ihe ndi ozo n'ime obodo, ma dika i mara, onyinye nyere ya aka nke oma ma nke a bu ihe onyinye a diri - nka.
Ihe nzuzo nke San Franciso na ikike dijitalụ, Ụlọ ọrụ Electronic Frontier (EFF), a na-akpọ usoro mmemme RFID "egwu egwu" na isiokwu August 30 nke isiokwu ya bụ, "Ịgụ, Ihe Edere na RFID ibe: Azụ Akwụsị Ọdịnihu na California. "
Rebecca Jeschke, EFF Media Relations Director, na-atụ egwu na nkà na ụzụ ga-eji nakọta data banyere ụmụ akwụkwọ na nkwubi okwu, n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na-ezighị ezi, ga-ejedebe na ndekọ ụlọ akwụkwọ na-adịgide adịgide.
"Njiri RFID na-enye ohere karịa ihe ndekọ ederede ntakịrị," ka Jeschke kwuru. "Kama nke ahụ, ọ na-enye ohere maka nyochaa mgbe niile maka ebe obibi nwa. Ọ bụrụ na a na-agụkarị oge ịgụ akwụkwọ, ị nwere ike ịmepụta ihe atụ zuru ezu banyere oge ụlọ akwụkwọ nwatakịrị - nke dị mfe iche na a ghaghị iji ya eme ihe, karịsịa dị ka ibe na-anọchite anya nlekota okenye na ikpe ziri ezi. "
Mgbe a jụrụ gị ma ọ bụrụ na a ga-agbasa usoro mmemme RFID na ogige ndị isi mmalite nke isi obodo, Mitchoff kwuru na ọ nwere ike ime na usoro.
"Anyị ga-enyocha ya, n'oge ụfọdụ, anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịgbasawanye ya," ka Mitchoff kwuru. "Ahụghị m ka anyị na-agbasawanye na saịtị ndị ọzọ n'otu oge, ọ ga-abụrịrị na ọ bụrụ na anyị nwere ike ime ya."
N'okpo ụtụtụ n'abalị Monday nke Big 3 News, onye na-ekiri onye na-ekiri ihe na-emekarị ka nkà na ụzụ RFID na-ejikarị soro ụmụ akwụkwọ.
Otu onye na-akpọ Texas, bụ onye nwere ahụmahụ na-arụ ọrụ na nlekọta ụbọchị, na-eche ma ndị isi ọnụ na-enyocha ọgwụ ndị nwere ike ịnweta ahụ ike maka ụmụaka ndị na-eji ngwaọrụ. Ndị ọzọ na-akpọ oku jụrụ ole akwụkwọ gbasara akwụkwọ onye ọ bụla dị site na components RFID ma ọ bụrụ na emetụ ha.
Otu onye nkụzi ụlọ akwụkwọ na Idaho kwuru otu echiche na ijikwa oku oku abụghị ihe dị oke njọ, ma jụọ ya maka iji ego ntinye ego gọọmentị etinyere maka ndị ezinụlọ na-enweghị ego.
Otu onye si Florida kwuru na nkà na ụzụ bụ ihe dị mma iji kpuchie ụmụaka.
Isi: http://www.big3news.net/2010/08/31/exclusive-california-pre-schoolers-tracked-with-rfid-devices-as-part-of-federal-stimulus-grant-for-head-head- malite /
Nzuzo 4859 3 Echiche Taa